Hay’ada geeska Afrika ee Badbaadada Aragga oo qalliin indhofiiq ah ka fulisay Jowhar (Sawiro) – Radio Jowhar
Hay’ada geeska Afrika ee Badbaadada Aragga oo qalliin indhofiiq ah ka fulisay Jowhar (Sawiro)
Haya’da Geeska Afrika ee Badbaadi Aragga ayaa ka fulisay mashruuc indho fiiqis lacag la’aan ah isbitaalka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo indhaha loo fiiqay 103 ruux halka 727 kale baaritaano lacag la’aan ah loogu sameeyay.
Dr Axmed Maxamed Cali (Xalaal) oo ah dhakhtarka fuliyay howlaha indhofiiqista ah ayaa sheegay in ay si joogta ah howlaha indho fiiqista ah ay uga fulin doonaan gobolka Sh/dhexe iyadoo hore 11 gobol ay qaliino uga soo fuliyeen.
Dadka loo fiiqay ayaa meelo fogfog ka yimid waxaana ka mid ahaa wiil 15 sano jir ah oo muddo 11 sano ah arag la’aa balse dib u helay aragiisa kadib markii qalliin lagu sameeyay mid kamid ah indhahiisa.
Wiilkan 15 jirka ah ayaa aad ugu farxay saaka markii uu aragiisa dib u helay isagoo sheegay in muddo dheer uusan arag aabihii balse maanta uu ku faraxsan yahay inuu arko aabihiis oo xilligii uu araga u soo laabanayay dhinac taagnaa.
“Waan sii wadi doonaa howlaha indhofiiqista ah dibna loo celin maayo qof ka cabanaya indho la’aan waana bilow howlaha wajiga labaad ee maanta la soo gabagabeeyay.”ayuu yiri Dr Xalaal.
Dr Xalaal ayaa kula taliyay dadka aragoodu uu liito inaysan dib u dhigan baaritaanada balse si deg-deg ah ula xiriiraan dhakhaatiirta indhaha si wax loogaga qabto inta uu bilow yahay xanuunkiisa. Dadka ka faa’ideystey qalliinkan indhofiiqida ah oo badankood ahaa dad sabool ah ayaa u mahadceliyay hay’ada fulisay mashruucan iyo Bangiga Premier oo maalgeliyay howlaha indhofiiqida ah.
Mashruuca la dagaalanka indho la’aanta oo ay hay’ada Geeska Afrika Badbaadada Aragga ay ka fulinayso gobolada dalka ayaa lagu wadaa in laga fuliyo gobolo kale oo dalka Soomaaliya kamid ah.